Dooni ganacsi oo u rarnayd ganacsato Puntland ah oo ku degtay biyaha Badda Cas - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandDooni ganacsi oo u rarnayd ganacsato Puntland ah oo ku degtay biyaha Badda Cas
July 25, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Dooni ganacsi oo xeebta Boosaaso kusoo xiranaysa.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dooni u rarnayd ganacsato Puntland ah ayaa ku degtay Badda Cas ee u dhaxaysa magaalooyinka Dubai iyo Boosaaso, sida ay sheegeen ganacsatada.
Doonida ayaa dhawaan kasoo baxday dekada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta waxayna kusoo socotay Boosaaso.
Sida uu khadka taleefoonka ugu sheegay warsidaha Puntland Mirror qof kamid ah ganacsatada ay doonida u rarnayd, doonida ayaa siday bagaash, qalabka dhismaha, baabuur iyo shidaal.
Ganacsadaha ayaa sheegay in ay u malaynayaan in degida doonida ay keentay dabaylo xoogan oo xilligan xagaaga ah oo kale ka dhaca biyaha Badda Cas.
September 14, 2016 Ugu yaraan saddex qof oo ku dhimatay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay duleedka Kismaayo
Qardho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hal milyan oo dollar ugu deeqday dadaalada loogu gurmanayo magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Qardho. Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa shir jaraaid oo uu ku [...]